AAP မီဒီယာကွန်ယက်သည် Calrec Brio Console ခြောက်ခုကိုတပ်ဆင်သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » AAP မီဒီယာကွန်ယက်ခြောက် Calrec Brio စက်များထည့်သွင်း
AAP မီဒီယာကွန်ယက်ခြောက် Calrec Brio စက်များထည့်သွင်း
HEBDEN တံတား BRIDGE, ဇူလိုငျ 30, 2019 - AAP သတင်းနှင့် Indus သတင်းများ - လာဟိုး-based AAP မီဒီယာကွန်ယက်က၎င်း၏သတင်းနှင့်ဖျော်ဖြေရေးလိုင်းများနှစ်ခုအဘို့အတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ, On-ဝေဟင်ရောစပ်ခြောက် Calrec Brio36 consoles စဝယ်ယူခဲ့သည်။ AAP လည်းဖြတ်ပြီးအသုံးပြုသောခံရဖို့သတ်မှတ်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းခြင်းနှင့်အစွမ်းထက် Brios အတူယခုနှစ်နှောင်းပိုင်းများအတွက်အပိုဆောင်းရုပ်သံလိုင်းပစ်လွှတ်စီစဉ်နေပါတယ်။
"ကျနော်တို့ကဤနှစ်ခုအသစ်သောလိုင်းများပေါ်တွင်စတင်လုပ်ကိုင်သည့်အခါကျနော်တို့ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများကိုထိမ်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်လွယ်ကူသောဖော်စပ်စေမယ်လို့ consoles စသုံးပြီးခဲ့သေချာအောင်လိုနှင့် Calrec ရဲနှစ်ဦးစလုံးသူတို့အားလိုအပ်ချက်," Suhail Ahmed က, AAP မီဒီယာကွန်ယက်မှာ Group မှ COO ရှင်းပြသည်။ "ဒီ Brios သင်ယူဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်ဂျင်နီယာများကို configure သာ 30 မိနစ်, နှစ်ရက်ကို ယူ. , တစ်နေ့သုံးခြင်းဖြင့်ကျနော်တို့တက်နှင့်အပြေးခဲ့ကြသည်။ သူတို့ဟာ preamps ရန်လွယ်ကူ access ကိုပူဇော်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စတူဒီယိုအရင်းအမြစ်များကို Dante ကနေတစ်ဆင့်အဝေးကနေဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်ဂျင်နီယာများ Dante-certified ရရှိထားပြီးဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, Dante ယခုအချိန်တွင်ကျနော်တို့ရဲ့ကွန်ယက်လိုအပ်ချက်များကိုပြည့်။ ကျနော်တို့ကြီးထွားအဖြစ်သော်လည်း, ငါတို့သည် Hydra2 လုပ်ငန်းတွေစတင်ဖို့ရန်စီစဉ်ထားသည်။ "
"Calrec စနစ်ကရှုပ်ထွေးခြင်းနှင့်ဖြန့်ကျက်အချိန်လျှော့ချ, ကျွန်တော်တို့ကိုဖုံးလွှမ်းအပေါင်းတို့နှင့်တကွကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ရန်ကု သ. မရသောနှင့်ကျွန်တော်တို့ကိုပြင်ပ Third-party devices တွေကိုပယ်ရှားတော်မူရန်ခွင့်ပြုတော်မူကြောင်းကိုတစ်ခုတည်းစနစ်ကပေးတော်မူပြီ," Jawad ကအလီ, AAP မီဒီယာမှာအထွေထွေမန်နေဂျာအသံလွှင့် & အိုင်တီကထပ်ပြောသည် Network မှ။ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်ဂျင်နီယာများကျွန်တော်တို့ကို Dante သုံးပြီးအသံ-over-IP မှအကြိုးပါကစ္စတန်အတွင်းပထမဆုံးရုပ်သံလိုင်းဖြစ်ခွင့်ပြုအပေါင်းတို့, Dante-certified ရရှိထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ "
"ဒီမိုက်ကရိုဖုန်း preamps အံ့သြဖွယ်ဖြစ်ကြောင်း, ငါတို့အသံအရည်အသွေးကိုသိသိသာသာတိုးတက်နေပါတယ်" ဟု Tanvir Hussain, AAP မီဒီယာကွန်ယက်မှာ PCR စစ်ဆင်ရေး၏ဦးခေါင်းကပြောပါတယ်။ "ကျနော်တို့လွယ်ကူသော GPI, ငါတို့ကလိုအပ်သည့်အခါ built-in နှောင့်နှေးစေရန်ချောမွေ့စွာအသွင်ကူးပြောင်းအစပျိုးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ရှိသည်ကြောင့်ကျနော်တို့မရှိတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြင်ပနှောင့်နှေးယူနစ်ကိုသုံးပါ"
အဆိုပါ Brios လေးလာဟိုးအတွက် AAP မီဒီယာကွန်ယက်၏အဓိကစတူဒီယို၌ရှိကြ၏။ ပဉ္စမက၎င်း၏ချိအတွက်စတူဒီယိုနှင့်၎င်း၏ပါကစ္စတန်စက်ရုံအတွက်ဆဌမ၌ကျိန်းဝပ်ဖြစ်ပါတယ်။ AAP သတင်းတစ်ခုဒူဘာသာစကားရုပ်သံလိုင်းနှင့် Indus သတင်းတစ်ခုအင်္ဂလိပ်ဘာသာရုပ်သံလိုင်း, နှစ်ဦးစလုံးဒေသခံနှင့်နိုင်ငံတကာပရိသတ်တွေရောက်ရှိဖို့။ programs ကိုပါဝင်သည် ကော်ဖီစားပွဲ, AAP Janab နှင့် AAP ကေး Muqabil။ AAP မီဒီယာကွန်ယက်ဒေသတွင်း၌သန်းပေါင်းများစွာမှသတင်းနှင့်ဖျော်ဖြေရေးထုတ်လွှင့်တဲ့အသံလွှင့်မီဒီယာအိမ်တော်ဖြစ်၏။
"ဒါဟာပါကစ္စတန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုသိသိသာသာဖောက်သည်အနိုင်ရရှိသည်။ ဤစီမံကိန်းနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက် AAP မီဒီယာကွန်ယက်တက်ရဖို့ကြီးအလျင်အမြန် Brios နှင့်အတူအပြေးနှင့်, မိမိတို့အင်ဂျင်နီယာများ consoles စသူတို့ကိုယ်သူတို့များ၏ခေတ်မီ features တွေလေ့လာသင်ယူရသောအတူငြိမ်ဝပ်ပေးထား, ဒီအကယ်စင်စစ်အမှုဖြစ်သက်သေပြ, "အန်သိုနီ Harrison, နိုင်ငံတကာပြောပါတယ် အရောင်းမန်နေဂျာ Calrec ။
AAP audio Brio36 အသံလွှင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ Calrec Calrec အသံ console ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor + LIVE ရောစပ် ထုတ်လုပ်မှု လှံ & Arrows ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2019-07-30
ယခင်: matrix အရောင်း Gateway မှာ Portal ကို၏ဖွံ့ဖြိုးရေးကြေညာ
နောက်တစ်ခု: နယူး Dalet Brio SMPTE ST 2110 နှင့်အတူအိုင်ပီတစ်ခုအုကမ်းမဖက်မြပေး